Nezvedu - Fujian Bailong Lace kugadzira Co., Ltd.
BAILONG Lace yakagadzwa muna 2003, inova bhizinesi remachira rine chekuita neKutsvaga uye Kuongorora, Kugadzira uye Kushambadzira. Isu tine hunyanzvi hwepamusoro-giredhi reti yemukati, zvipfeko zvemukati nehembe.
Yepamberi uye inoshanda komputa jacquard muchina uye inoenderana kuruka michina kubva kuGerman Karl Mayer inogona kuburitsa zana matani ematare tambo pamwedzi, zvichitigonesa kuti tigone vhoriyamu maodha. Kusvika parizvino, vagadziri vane ruzivo rwepamusoro vakagadzira zvinopfuura zviuru gumi zvemhando kuti iwe usarudze kubva. Zvichakadaro, ichienderera mberi nekuvandudza mhando uye kugadzira gumi nemashanu matambo dhizaini pamwedzi kusangana zvinoshanduka zvemusika zvinodiwa uye maitiro.
Iyo fekitori ine nyanzvi yekutengesa timu iri kuita bhizinesi rekunze uye yakagadzira inodarika mamirioni gumi nemashanu emadhora kukosha kwekunze. Yakanakisa sevhisi nemutengo wakanakisa uye yakasarudzika dhizaini ine mhando yepamusoro inoita kuti zvigadzirwa zvedu zvipararire pamusoro peEurope, South America, East-South Asia ne Africa.
Kuramba tichitevedzera musimboti webasa "Kutendeseka-kwakavakirwa, kunoitirwa basa", BAILONG LACE inotenda kuti "Kutendeseka kunowana kubatana, mushandirapamwe unokanda njere." Isu tinogadzirisa hurongwa hwepasirese, kutora yazvino manejimendi maitiro, inounganidza matarenda kubva kuminda yese, kuvaka bhizinesi tsika. "Shingairira kuve wakanakisa" kwave kutonga kwemafambiro kune wese mushandi. BAILONG Lace inotangisa kurwisa kuti ive bhizimusi rekushambadzira nehunyanzvi hwepasi rose.